पाकिस्तानको एक पाँच तारे होटल बन्दुकधारीको कब्जामा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पाकिस्तानको एक पाँच तारे होटल बन्दुकधारीको कब्जामा
प्रकाशित मिति २९ बैशाख २०७६, आईतवार ०७:३७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । पाकिस्तानको एक पाँच तारे होटल बन्दुकधारीले कब्जामा लिएका छन। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर सहरमा रहेको पाँच तारे होटल पर्ल कन्टिनेन्टलमा बन्दुकधारीले हमला गरेर कब्जामा लिएका हुन। तीन बन्दुकधारीले छ। होटलमा शनिबार साँझ हमला गरेका थिए। उनीहरूको कब्जाबाट होटललाई मुक्त गर्ने क्रममा एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ।
ती बन्दुकधारीले त्यस्तो बेला उक्त होटलमा कब्जा गरेका हुन् जतिबेला कोही पनि ग्राहक त्यहाँ थिएनन् र होटलका स्टाफ पनि कमै मात्र उपस्थित थिए। हमलाको जिम्मा विखण्डनकारी संगठन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मीले लिएको छ। उक्त संगठनका प्रवक्ता जुनैद बलोचले वैदेशिक लगानीलाई निशाना बनाउने नीति अनुसार उक्त हमला गरिएको हो। अझै पनि केही कर्मचारी उनीहरूको नियन्त्रणमा भएको आशंका गरिएको छ।
तर, सुरक्षाकर्मीले भने होटलको ९५ प्रतिशत भाग बन्दुकधारीको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिएको छ। बन्दुकधारीले स्थानीय समयअनुसार शनिबार साँझ ४ बजेर ५० मिनेटमा होटलमा महला गरेका थिए। गत साता मात्रै १४ जनाको ज्यान लिनेगरी हमला भएको थियो। उक्त महलामा ज्यान गुमाउने मध्ये ११ जना सुरक्षाकर्मी थिए।
ट्राफिक प्रहरी किन झरे सडकमा ?
प्युठान । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्युठानले सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न अभियान थालेको छ।पछिल्लो समय जिल्लामा सवारिसाधनको संख्या ह्वात्तै…
काठमाडाैं । पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था एनजीओलाई दिईरहेको खुलासा भएको…
दरबन्दी खाली हुँदा समेत बढुवा नभएपछि उच्च अधिकृतमा निराशा: प्रदेशमा ६ एआइजी, प्रमुखमा डीआइजी !
काठमाडौ । आफू निकटलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा बढुवा गर्न अघिल्लो सरकारले…
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्स सञ्चालनमा आएको तीन वर्षमा चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ घाटामा…
ओली सरकारको जात्रा: मन्त्रालय एकः सचिव तीन !
काठमाडौं । एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत तीनजना हुने गरेका थिए । तर, सचिव एउटै हुन्थे ।…
अभिनन्दनबारे कांग्रेसले हिसाब किताब खोज्ने, फस्ने भए धेरै
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमका बारेमा प्रदेश सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ ।